Usephenduke iqaqa umfundisi waseWeseli - Ilanga News
Home Izindaba Usephenduke iqaqa umfundisi waseWeseli
Usolwa ngabazalwane ngokukhokhwa ko-R300 bokumvalelisa
USEPHENDUKE iqaqa kubazalwane umfundisi wamaWeseli, eDay Circuit, eHighFlats, oso-lwa ngokukhokhisa abazalwane o-R300 – ikhanda lomuntu – okuyimali yokumvalelisa njengoba eseya kwenye isekethe.
Lokhu kuvaleliswa kukaMfu Nelson Bika kuthiwa sekuhluka-nise ibandla phakathi, njengoba kuthiwa kukhona abathi kasikho nesidingo sokumvalelisa ngoba unguzwilakhe osehlule ngisho uMbhishobhi Vuyo Dlamini, kanti kukhona abathi makasale eseva-leliswa ahambe, baphelelwe yicala.
Kuthiwa ngaphandle kokufu-nwa kwemali yokumvalelisa ebandleni – efunwa ngisho nasezalukazini ezihola impesheni – uMfu Bika usolwa nangokuthi ulimi lwakhe kaluqoqekile nje-ngoba kubikwa ukuthi uke wathathana nelungu lebandla waze wakhipha igama elithi: “Wakhuluma nami kanje, ngidla umkakho yini?”
Umthombo weLANGA oyilungu laleli bandla uthi lolu daba luze lwangenelelwa nanguMbhishobhi Dlamini.
“Kuthe uma eselukhulumile umbhishobhi lolu daba, umfundisi wazehlisa waxolisa, kodwa nama-nje akamkhulumisi lo mzalwane.
“Uma umzalwane ebuza ukuthi kungani engamkhulumisi ekubeni umbhishobhi sewabahlanganisa baxolelana, wathi naye lo mzalwa-ne akamkhulumisi ngakho ngeke kuqale yena.
“Ngikhuluma nje, kunamagatsha umfundisi angawahambeli. Uma ebuzwa ukuthi kungani engasawahambeli la magatsha, uthi ngeke aye kuwona ngoba kunabantu angazwani nabo,” kusho umtho-mbo.
Uqhuba uthi embuthweni wa-madodana kunekomidi elaqokwa nguMnu Godfrey Khuboni, oyise-kela likaMfu Bika, okufanele nga-be uhamba naye uma kuyokhi-shwa imali ebhange, kodwa uvele athathe owayeyisekela lakhe ku-dala, osewakhishwa ngisho esi-khundleni, ongenawo amandla okusayina.
UMnu Khuboni uvumile ukuthi selokhu waphatha kulesi sikhu-ndla akakaze asayine. “Kasikho isizathu esiphathekayo sokuba ngingasayini.
“Ihlandla lami leminyaka emi-thathu seliyaphela, kangiyisayineli imali, isayinwa ngobephethe ku-dala. Siwenzile umhlangano naba-phethe ebandleni, kwaba ngathi wudaba oluzolungiseka kodwa namanje kangisayiniswa,” kusho yena.
Igosa lesekethe, uMnu Bheku-kwazi Sikhosana, lithe kuyiqiniso ukuthi kunemali eqoqwayo eba-ndleni yokuvalelisa umfundisi ko-dwa kayisiyo impoqo.
“Isinqumo sokukhokha le mali kasithathwanga ngumfundisi, sa-thathwa emhlanganweni ohlanga-nisa amagoso, abakhokheli, nozi-hlalo bamakomidi, kwavunyelwana.
“Kulo mhlangano kwathiwa umuntu angakhokha imali igcine ku-R300, okungasho ukuthi kuphoqelekile ukukhokhwa kwayo.
“Odabeni lokuthi umfundisi ku-nomzalwane angakhulumisani naye, lwalungiswa ngumbhishobhi futhi wazisola umfundisi ngoku-ngakhulumi kahle waxolisa.
“Kulokhu kokuthi kunezindawo angazihambeli nokuthi uMnu Khuboni akasayini, ngiyile kuyena umfundisi ngambuza ngazo, wa-ngitshela ukuthi uzibona enga-phephile ngoba abazalwane balezi zindawo basho ukumbamba ngezandla phambi kombhishobhi.
“Udaba lukaMnu Khuboni lufi-kile kimina, kumanje siphezu kwa-lo sizama ukululungisa ngoba kube yiphutha impela ukuthi angasayiniswa, kwazise isikhundla sakhe siyakugunyaza ukuba asayi-ne,” kusho yena.
Ethintwa uMfu Bika ukuba aphefumule ngalezi zinkinga, ubhoke ngolaka wathi izindaba zebandla ngezebandla, abazi-khipheli ngaphandle. “Angiyiphenduli into engabha-dlanga (umbhedo), uma uqhubeka nalolu ngizokuthumelela amasamanisi,” esho evala ucingo.
UMbhishobhi Dlamini uthe zi-khona izinkinga kuleli sekethe, kodwa bazamile ukuzilungisa yize engeke aveze okuningi ngoba ukhona okhulumela ibandla, okunguMbhishobhi Purity Mali-nga, nokho ozanyiwe ocingweni lwakhe kodwa wangothalakala njengoba belungangeni.
Previous articleBafuna izimpendulo ngokwenzeka ePhoenix
Next articleWakhuzwa uNgizwe ngomkhankaso